Ireo kojakoja Apple vaovao, nesorin'ny iFixit | Vaovao IPhone
Luis del Barco | | Apple products
Apple dia nanangana andro roa lasa izay ny fanavaozana ny kojakoja ho an'ny Mac. Fanavaozana iray izay efa niandry ary tonga izany vokatra tena mitovy amin'ireo efa ananantsika, fa somary tsara kokoa. Drafitra tsara kokoa, fizakantena lehibe kokoa ary 3D Touch no fananana ifaninan'ireto fitaovana vaovao ireto. Tsy misy isalasalana fa tsy ho izany ny vidiny.
Toy ny fomban-drazana isaky ny mametraka amidy vaovao i Apple, manomboka amin'ny iFixit dia nidina izy ireo hiasa hanala ireo fitaovana vaovao, lazao anay inona marina no entin'izy ireo ao anatiny ary manome ny mari-pahaizana angano izay hanjary orientation hahafantarana ny mora na ny hasarotany amin'ny fanamboarana ilay zavatra resahina raha toa ka simba na mizaka tsy fahombiazana amin'ny fotoana rehetra.
Ny totozy tsy misy tariby vaovao dia manana ny mampiavaka azy indrindra ny fanoloana ny batery amin'ny bateria, zavatra izay ho tsikaritray amin'ny fitomboan'ny fizakantena. ny 1986 mAh bateria izay handoa vola afaka 2 ora amin'ny alàlan'ny seranan-jiro misy ny Jiro any amin'ny farany ilany ary maneho fahaiza-manao 9% ambonimbony kokoa raha oharina amin'ireo iPhone 6s.
La isa iFixit ho an'ity fitaovana ity dia 2 amin'ny 10 (10 no haavo mora indrindra amin'ny fanamboarana). Raha atao teny hafa, dia ho sarotra be amintsika ny manamboatra samirery ny Magic Mouse 2 antsika raha toa ka misy antony tsy hijanonany intsony ary tapitra ny fangatahana fiantohana. Ny vidin'ny Magic Mouse 2 dia 89 euros.
Ilay tovovavy tsara tarehy amin'izy telo lahy natolotra. Ny fanavaozana ny fisehoana ivelany toy izany dia manintona kokoa azy ankehitriny noho ny teo aloha, ankoatry ny ananany sehatra lehibe kokoa hanaovana fihetsika. Na izany aza, ny zava-baovao lehibe indrindra dia ny fampidirana ny Force Touch ao anatiny, singa iray efa nampiharina tao amin'ny Apple Watch sy ao amin'ny MacBooks vaovao, ary koa ao amin'ny iPhones 6s and 6s Plus vaovao (amin'ity farany ity, amin'ny anaran'ny 3D Touch).
Amin'ity tranga ity koa ny bateria dia nosoloina a Bateria 2014 mAh, mahatonga antsika hanadino ny manahirana amin'ny famoahana ilay maodely teo aloha. Toy ny amin'ny totozy, ny famahana dia hatao amin'ny alàlan'ny mpampitohy Lightning koa. iFixit manome azy 3 avy amin'ny 10, noho izany dia tsara kokoa raha eo ambany fiantohana raha mbola simba. Io no lafo indrindra amin'ireo kojakoja telo, ny vidiny amidy 149 euros.
Izy io koa dia nandalo famolavolana endrika raha oharina amin'ny taloha fa, ny mahagaga, tsy mampiditra ny mekanisma lolo izay hitantsika naseho tamin'ny MacBook vaovao. Izy io dia manana bateria 2.98 Wh, izay adika ho fizakantena izay manakaiky ny iray volana ampiasaina. Mba hanomezana vola azy io, toy ny amin'ireo fitaovana roa natolotra, tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny alàlan'ny port Lightning, fenitra iray izay toa tapa-kevitra ny hampiditra Apple amin'ny ampahany betsaka amin'ny vokatra vokariny.
Toy ny Magic Keyboard, ny isa azo amin'ny mason'ny kritika iFixit dia 3 amin'ny 10. Averiko indray, ho sarotra be amintsika ny manamboatra azy irery raha toa ka tsy mahomby ny singa rehetra ao aminy. Miorina eo afovoan'ny Magic Mouse 2 sy ny Magic Trackpad 2, ny vidin'ny keyboard vaovao dia 119 euros.
Ny fitaovana vaovao an'i Apple dia tsy revolisionera, saingy tsy mody tsy izy koa. Manohy manatanteraka fotsiny ilay asa noforonina izy ireo taona vitsivitsy lasa izay, vao izao izy ireo no nanao tsara kokoa (marina fa tsy mahita endri-javatra fanampiny ho an'ireo efa nanana ny Mouse ohatra isika). Raha manapa-kevitra ny hanakalo ireo kojakoja taloha amin'ireto vaovao ireto isika dia azo antoka fa ho hitantsika ny fahasamihafana (indrindra amin'ny tranga ny Trackpad), na dia mbola sarotra ho antsika ny mitady antony manamarina ny fividianana ny "fonosana" feno ho an'ny mpampiasa antonony izay tsy handany ora be loatra eo alohan'ny solosaina isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iFixit dia nandefa ilay Magic Mouse, Magic Trackpad ary Magic Keyboard vaovao
Ahoana ny fomba hanokafana fisie IPSW amin'ny Mac